Salaamanews » Madaxweyne Obama ayaa qiray in Mareykanku uu ka qeyb qaatay howlgalkii Buula-mareer
Home » Warar Madaxweyne Obama ayaa qiray in Mareykanku uu ka qeyb qaatay howlgalkii Buula-mareer Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 14th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Halkaan ka daawo wareysiyo uu madaxweynaha Soomaaliya bixiyey intuu uu Mareykanka ku sugnaaMadaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaHalkaan ka daawo sawirradii kulankii madaxweynaha Soomaaliya iyo Hillary ClintonTaariikhda Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama (Daawo sawirro)Mareykanka oo taageero buuxda siiyay mucaaridka ka dagaallama dalka Syria
(Salaamanews)-Diyaaradaha ciidamada Maraykanka ayaa si kooban u galay gudaha Soomaaliya, habeenimadii Sabtida ee 12/017/2013 si ay u taageeraan hawlgalkii ay hoggaaminayeen ciidamada Faransiisku kaas oo lagu badbaadinayey muwaadin u dhashey Faransiiska, Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sidaas ku yiri warqad uu u direy aqalka Baarlamaanka Maraykanka.
Habeenimadii Sabtida ayaa ciidamo gaaray 50 askeri oo wata 6 diyaaradood ka fuliyeen tuulada Buulamareer ee Gobolka Shabeelada Hoose hawlgal dhicisoobey, kaas oo ay doonayeen in ay ku soo furtaan Denis Allex oo tan iyo sanadkii 2009 al-Shabaab afduub u haysteen, madaxweyne Obama warqadiisa ugama hadlin natiijada hawlgalkaas, waxaana uu kaga hadley keliya doorka Maraykanku kulahaa oo keliya.
“Ciidamada Maraykanku waxay siiyeen taakulo farsamo oo xadeysan ciidamada Faransiiska ee fulinayey hawlgalka, haddii loo baahdo, diyaaradda la socotey kuwa Faransiiska ee Maraykanku lahaa ma sidin wax hub ah” ayuu warqadda ku yiri Obama.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa warqadda u direy sharci dejiyaalka Maraykanka, isaga oo buuxinaya waajibaadka la xiriira marka hawlgal dagaal la qaadayo, taas oo khasbeysa in uu ku wargeliyo mudo 48saac gudahood ah Kongresska.
Diyaaradaha ka qaybqaatey hawlgalkaas fashilmey ayaa gaaraya 6 diyaaradood kuwaas oo 5 kamid ah ay iska lahaayeen dalka Faransiiska, waxaana hawlgalkaas ku dhintey mid kamid ah kumaandooska Faransiiska iyo Denis Allex oo ahaa la haystaha, inkasta oo al-Shabaab ay sheegeen in ay labaduba noolyihiin ayna ar ka soo saarayaan 48saac gudahood taas oo ku beegan maanta.
Minneapolis, Minnesota Info@salaamanews.com
Tags: warar « Qoraalkii HoreMuran iyo cakirnaan ayaa ka dhashay shirkadaha xawaaladaha oo shaqadoodii Jowhar joojiyay	Qoraalka Xiga »Wasiirka maaliyadda Ciraaq ayaa si halis ah uga badbaaday isku day dil	Halkan Hoose ku Jawaab